A320 परिवार इग्निशन स्विच
प्रश्न A320 परिवार इग्निशन स्विच
7 महिना3सप्ताह पहिले #1264 by 3201907
मैले अक्सिजनका लागि FSX को लागि A320 परिवार डाउनलोड गरी सकेको छैन, लगभग दुई वर्ष बिना।
मैले हालै P3D v4.3 मा अपग्रेड गरेको छु र जब विमानहरूले लोड गर्दछ, "इग्जेशन स्विच" जुन कुनै पनि परिवर्तन गर्दैन। त्यसैले, मैले इन्जिन सुरु गर्न सक्दिन।
यो वा मद्दतमा कुनै पनि जानकारी?
7 महिना3सप्ताह पहिले -7महिना3सप्ताह पहिले #1265 by rikoooo
मैले भर्खरै परीक्षण गरेँ र सबभन्दा राम्रो काम गरिरहेको थियो, तथापि, मैले भित्री कुकपिटको सट्टा 2D प्यानलबाट इग्गेशन स्विचको प्रयोग गरे, जस्तै मेरो प्रयास गर्नुहोस् र तपाईं समस्या समाधान गर्नुपर्छ। CTRL + E पनि चाल गर्नेछ
अन्तिम सम्पादन:7महिना3हप्ता पहिले rikoooo.
7 महिना3सप्ताह पहिले #1266 by 3201907
म आज रात वा भोलि प्रयास गर्नेछु। मैले 2D प्यानल को उपयोग को बारे मा कभी नहीं सोचा; मैले हाहा बिर्सें
मैले मास्टर इग्निशन स्विच (ओन) को किबोर्डमा 'I' की कुञ्जी साधारण क्लिकको साथ स्विच गरेको "नक्सा" गरे तर यसलाई बन्द गर्न कुञ्जी नक्शा गर्न विकल्प छैन। यद्यपि, म कम ख्याल राख्न सक्छु यो वैसे पनि "बन्द" स्विच गर्दछ।
एक अन्तिम कुरा, र A320 परिवार को बारे मा स्विच को बारे मा नहीं: FSX मा कैमरे स्पेसबार र माउस व्हील संग zoomable थिए। केवल धेरै क्यामेराले यसलाई यसलाई P3D v4.3 मा अनुमति दिन्छ फेरि, यो कुनै पनि अपूर्ण गर्न सकिँदैन तर उदाहरणको लागि FSX मा म माउस जूम दुवै साथ विन्डर क्यामेराहरू (बाह्य) को साथमा नियन्त्रण गर्न सक्दछ र साथसाथै नियन्त्रण / Shift / Enter कुञ्जीहरू । यो कुनै पनि ओवरराइड? संलग्न तस्विर हेर्नुहोस्। FSX मा माउस जूम प्रयोग गर्न सक्षम भयो र त्यस पछि क्यामेरा तल इन्जिनमा नियन्त्रण / Shift / Enter कुञ्जीहरू प्रयोग गर्नुहोस्। संक्षेपमा, मैले आफ्नै क्यामेरा हेराइहरू बनाएँ र त्यसपछि त्यहाँ उडान बचत गरिरह्यो ताकि क्यामेराहरू रिसेट हुँदैन।
स्विचको साथ सहयोगको लागि धन्यबाद!